काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिको निवाचन चैत ९ गते गर्ने भएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षता आज बसेको बैठकले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सोे मितिमा गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिएका छन् ।
आयोगका अनुसार चैत ९ गते शुक्रबार बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा मतदान हुनेछ । निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार, चैत १ गते मतदाता नामावली प्रकाशन, चैत ३ गते उम्मेदवारी दर्ता तथा चैत ४ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन भई परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र आयोगले उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिङ्ग वा समुदायको हो सोभन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवारका रूपमा मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । फागुन २९ गते सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनबाट नेपालको राष्ट्रपतिमा खस आर्य समुदायका महिला श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भइसकेकी छन् ।
उपराष्ट्रपति पदका लागि सोही लिङ्ग वा समुदाय भन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिको मनोनयनपत्र मात्र दर्ता गर्न गराउन पाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तोकिएको मितिमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्न तयारी शुरु गरिसकेको जनाएको छ ।
प्रकाशित : बुधबार, फागुन ३०, २०७४१६:२६
पदमुक्त प्रधानन्यायधीस पराजुलीले नै गराए राष्ट्रपति भण्डारीलाई सपथ
सभापति देउवाप्रति डा.काेइरालाकाे कडा प्रतिक्रिया, नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म काँग्रेसले गति लिँदैन
राराबाट देशबासीको नाममा सम्बोधन गरेर सिधै हुम्ला पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले के भने ?
सरकारी कर्मचारीले दोब्बर काम गर्नु पर्ने ! प्रधानमन्त्रीले दिए निर्देशन !
राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि टुङ्गो लागायो यी तीन उम्मेदवार
डा. केसीलाई भेट्न देउवा टिचिङमा: केसीलाई कांग्रेसले उचालेको आरोपको यसरी गरे खण्डन !
३३ मिनेट अगाडि बिगुल